HTC Desire 816 လက်ဆောင်သည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည် Androidsis
Francisco Ruiz | | ပြိုင်ပွဲ, HTC က
ယနေ့ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းသတင်းကောင်းကိုကြေငြာမိပါသည် HTC စပိန်နိုင်ငံ, ပြီးတော့မှတဆင့် Androidsisကျနော်တို့ပူးတွဲပေးရမယ့်နေကြသည် ကို HTC Desire 816, စီးရီးတွင်ထည့်သွင်း terminal ကိုတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်း mid / high range Android ဒီဆောင်းပါးရဲ့ခေါင်းစဉ်မှာပါတဲ့ဗီဒီယိုမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းအမှန်တရား၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဒီဇိုင်း၊ အမှန်တရားကတော့သူတို့ကကျွန်မကိုအရမ်းပီတိဖြစ်မိပါတယ်။
ထိုအခါငါအသေးစိတ်ရှင်းပြပါ ဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်ချက်များ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင် HTC Desire 816 လက်ဆောင်ပေးသည် ဒီမှာသာအခမဲ့ရနိုင်မယ် Androidsis။ ဒါကြောင့်ယခုသင်သိပြီ, ဒီ terminal ကိုလုံးဝအခမဲ့လွှတ်ပေးရန်အခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်မသွားစေရန်ဤဆောင်းပါးကိုဆက်ဖတ်ပါ။
1 HTC Desire 816 အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အနိုင်ရရှိပြီးဖြစ်သည်။
2 နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ HTC Desire 816
3 HTC Desire 816 လက်ဆောင်ပေးမှုတွင်ပါ ၀ င်ရန်ဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်ချက်များ
4 တရားဝင်အခြေပြု HTC Desire 816 လက်ဆောင်များ
HTC Desire 816 အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အနိုင်ရရှိပြီးဖြစ်သည်။
၏အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကဆုရှင် ကို HTC Desire 816 ငါတို့အတူတူ raffled သော Androidsis y HTC စပိန်နိုင်ငံ ခဲ့ Granada မှ Javi Gomez.
ဂုဏ်ယူပါတယ် @ javigomez32 လာမည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းသင်သည်သင်၏လက်ခံရရှိလိမ့်မည် ကို HTC Desire 816 မင်းအိမ်မှာ
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ HTC Desire 816
HTC Desire 816 လက်ဆောင်ပေးမှုတွင်ပါ ၀ င်ရန်ဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်ချက်များ
နိုင်ရန်အတွက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးခံရဖို့လိုအပ်ချက်များကို ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် HTC Desire 816 အတွက်ကဲ့ရဲ့ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ပါ ၎င်းတို့သည်အနည်းငယ်သာကန့်သတ်ထားသည်၊ အထူးသဖြင့်အောက်တွင်ရှင်းပြထားသောလိုအပ်ချက်သုံးခုသာဖြစ်သည်။
ပဌမ Androidsis Twitter ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ် အောက်ပါခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ
ဒုတိယ HTC Spain ၏နောက်လိုက်ဖြစ်လာသည် အောက်ပါခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ
တတိယအခွအေနေသို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်, ဒီ tweet ကို tweet သင် HTC Desire 816 ကိုအဘယ်ကြောင့်အနိုင်ရလိုကြောင်းမူလအဖြေတစ်ခုထည့်ခြင်း:
# SorteoHTCDesire816 @Androidsis နှင့် @HTC_es တို့ကဆွဲယူထားတဲ့ HTC Desire 816 ကိုငါလိုချင်တယ်။
အောက်ပါခလုတ်ကို သုံး၍ လိုအပ်သော hastag ကိုသင် tweet လုပ်နိုင်သည်။
အဆိုပါ raffle Random.org မှတဆင့်ပြုလိမ့်မည် ဆုကို Androidsis နှင့် HTC Spain's Twitter တို့တွင်ကြေငြာလိမ့်မည်။ HTC Desire 816 ကိုကျွန်ုပ်တို့အနိုင်ရသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းကိုအဆင်ပြေစွာကြေညာလိမ့်မည် Androidsis ဒီတူညီတဲ့ post ကို update ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်အခုသင်သိပြီ၊ အကယ်၍ သင်သည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိသောစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုသင့်ကိုယူရိုတစ်ခုတည်းမကျစေဘဲဖြန့်ချိလိုပါက၎င်းကိုမတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ HTC Desire 816 လက်ဆောင်ပေးသည် ဘာကိုကမ်းလှမ်းပါသလဲ Androidsis y HTC စပိန်နိုင်ငံ လုံးဝ gratis.
နောက်တစ်ခုကမင်းကို HTC Desire 816 လက်ဆောင်ပေးမှု၏တရားဝင်အခြေခံ
တရားဝင်အခြေပြု HTC Desire 816 လက်ဆောင်များ
နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်သည်ပထမပွဲသို့ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဆက်သွယ်မှုမှ ၁၅/၁၅/၂၀၁၅ ရက်နေ့အထိ ၂၃.၅၉ အထိဖြစ်သည်
အနိုင်ရသူကို random.org မှတဆင့်ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ပြီးဆုကိုလက်ခံပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်လူမှုကွန်ယက်များမှဆက်သွယ်မှုကို 19/01/2015 မှ 25/01/2015 အထိရရှိလိမ့်မည်။ အနိုင်ရသူသည် Androidsis နှင့် HTC Spain ၏နောက်လိုက်ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ရမည်။ Androidsis နှင့် HTC Spain တို့ကိုဖော်ပြပြီးဖြစ်ရမည်။ # SorteoHTCDesire816 ၏ hashtag ကိုပင်တူညီသောတွစ်တာတွင်သုံးရမည်။ Androidsis နှင့် HTC Spain တို့သည်ဆုကိုလက်ခံရန် Twitter ရှိပုဂ္ဂလိကစာဖြင့်ဆက်သွယ်သူအားဆက်သွယ်လိမ့်မည်။ အနိုင်ရသူသည်ဆုလက်ခံသူနှင့်ဆက်သွယ်မှုမှ ၄၈ နာရီရရှိမည်ဖြစ်သည်။ မရရှိလျှင်, ဆုအစားထိုးမှသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီအစားထိုးသူကဒီအစားထိုးအကြောင်းကြားစာအပြီး 48 နာရီအတွင်းဆုလက်ခံမထားဘူးဆိုရင်, ပြိုင်ပွဲပိတ်ပင်ထားလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » [SWEEPSTAKES] HTC Desire 816 ကို Androidsis နှင့် HTC Spain တို့ပါ ၀ င်သည်
ပက်ထရီရှာ demedice ဟုသူကပြောသည်
Patricia Demedice အားစာပြန်ပါ
ရုသသည် Sanjuan ဟုသူကပြောသည်
မင်း! ငါဖုန်းအသစ်လိုတယ်၊ ငါ့အာလူးပြိုတယ်။ ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူး
Ruth Sanjuan အားပြန်ပြောပါ
ငါပါ ၀ င်ချင်တယ်၊ ဒါကငါ့ကိုထိမိတယ်…………ငါ HTC အသစ်လိုတယ်။ ငါ့မှာနှစ်ခုရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် whatsaap ကိုသုံးလို့မရဘူး၊ update လုပ်ဖို့ငါအရာအားလုံးကိုဖျက်ပစ်ရမယ်။
Francisco Martinez ဟုသူကပြောသည်
ငါ Twitter နဲ့ Facebook မှာပါ ၀ င်ပြီးမျှဝေတယ်
Francisco Martinez ကိုပြန်ပြောပါ
ငါအဲဒါကိုကြိုက်တယ်၊ ငါ sign up လုပ်မယ်
Twitter နှင့် Facebook တွင်
ငါပါ ၀ င်ပြီးပြီ။ ဒီပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။
Jose David အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၏ HTC Waldfire မှာ (၄) နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးသင်ခံစားမိသည့်အခါ၎င်းသည်ပြန်လည်ဖွင့်ပြီးသော့ခတ်သွားလိမ့်မည်။
Esco Garcia ဟုသူကပြောသည်
Esco Garcia သို့စာပြန်ပါ
ကျွန်ုပ်သည် Facebook နှင့် Twitter တို့တွင်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ https://twitter.com/lopez0_antonio ငါမိုဘိုင်းလ်ကိုလိုအပ်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကမြန်မြန်ဆန်ဆန် ၀ ယ်ပြီး ၀ င်ထွက်သွားပြီးဝယ်လိုက်တဲ့တရုတ်လူမျိုးပါ။ because ပြီးတော့ဘုရင်တွေကငါ့ကိုမပေးခဲ့ဘူး၊ အားလုံးကိုကံကောင်းပါစေ၊ အခွင့်အရေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!
Blade43v3r (@ Blade43v3r) ဟုသူကပြောသည်
ဂရိတ်သရေကျ။ ကျွန်ုပ်၏ဖိနပ်သည်တရုတ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လွှမ်းခြုံမှုမရှိတော့သောကြောင့်ဤ Peaso Habemus Terminal Cachondo တွင်ကျွန်ုပ်ပါ ၀ င်သည်။
Blade43v3r (@ Blade43v3r) ကိုစာပြန်ပါ
မာရီယာ Coronada ရို ဟုသူကပြောသည်
Maria Coronada Rosa အားပြန်ကြားပါ
Isabel Gragera ဟုသူကပြောသည်
Isabel Gragera အားပြန်ပြောပါ
ငါပါ ၀ င်သည်။ ဖေ့စ်ဘုတ်တွင်မျှဝေသည်။ ၎င်းသည်အံ့ဖွယ်ဆုကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်သည်။
သူပါဝင်ခဲ့သည်! အလွန်ကြီးစွာသောမိုဘိုင်း! ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းလ်အသစ်ကိုအသစ်ပြန်လုပ်ခြင်းသည်ကောင်းလာပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တွင်ရှိနေသောကင်မရာသည်အလွန်ဆိုးရွားပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်ကောင်းသော selfies လိုအပ်သည်။ အရည်အသွေးအတွက်ရှက်စရာမဟုတ်ပါ။ အဆိုပါ giveaway, အလွန်ကြီးစွာသော giveaway အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကံကောင်းပါစေ!
Jose Luis Gonzalez ကိုပြန်ပြောပါ
တတိယအခြေအနေသို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်၊ ဤ tweet ကိုတွစ်တာတွင်တင်ခြင်းမူလအဖြေများကိုဘာကြောင့် HTC Desire 816 ကိုအဘယ်ကြောင့်အနိုင်ရလိုသနည်း။
Finger- ညစာစားပွဲညစာစားပွဲ; ဒီနေ့ပျော်စရာမီးဖိုချောင်
CES ၂၀၁၅ - ZTE မှသတင်းများဖြစ်သည်